Mas’ uuliyiin ku dhaawacmey qarax lala beegsadey iyo xaalada caafimaad ee masuuliyiintaas - Hoyga Wararka
Home Somali News	Mas’ uuliyiin ku dhaawacmey qarax lala beegsadey iyo xaalada caafimaad ee masuuliyiintaas
Waxaa Magalada Muqdisho la keenay dhaawacyada Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo Saraakiil Ciidan,kuwaas oo ku dhaawacmay qarax lagula beegsadey Tuulada Abiikarow oo ku taalla duleedka degmada Shalaanbood ee Gobolkaasi Shabeellaha Hoose.
Guddoomiye kuxigeenka Maaliyadda Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle ayaa u in dadka dhaawacyada soo gaaray ay ka mid ahaayeen Guddoomiye kuxigeenka degmada Qoryooley,Xoghayaha degmada Midka mid ah Saraakiisha Ciidamada iyo lataliyeyaal sare.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi raaciyey in dhaawacyada mas’uuliyiintaan ay diyaarad gaar ah kasoo qaatay Shabeellaha Hoose,isla markaana ay keentay Magalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad loogu daweeyo.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in ka maamul ahaan ay wadaan baaritaano ku aadan sida uu u dhacay qaraxa,isla markaana jawaab ay ka sugayaan Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Shabeellaha Hoose iyo saraakiil kale oo baaritaanada ku jira. Al-Shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyada qaraxa lala eegtay mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose
Sideed U aragtaa iney Somaliland Sheegto Iney Diyaar...
dacwad ka dhan ah Somaliland oo loo gudbiyey...
Muuse Biixi oo qorshe cusub Layimid Taasi oo...
Dowladda Ingiriiska ayaa diidan dibu dhaca soo wajaha...